1.Qalabku wuxuu garwaaqsan karaa fiber galaas qalliin jabinta hawlgalkii googoynta iyada oo aan la xirin, sidaasna si weyn loogu hagaajinayo wax -soo -saarka.
2.Fiber -ka quraaradu wuxuu leeyahay heer sare oo dhex -dhexaad ah, dhaawac yar iyo dhalid sare.
3.Waxa ku jira fiber -ka quraaradu waa 20%、 30%、 40%、 iyo 60%, kaas oo dabooli kara baahida macaamiisha kala duwan.
Nooca Strand NO. Xawaaraha toosan (m/min) Waxyaabaha ka samaysan muraayadda (%) Soo saar (kg/saac)
Xadhig dhaadheer oo ah fiberglass cusbi la xoojiyay ayaa la gooyaa, tusaale ahaan, dhagxaanta dhagaxa leh oo dhererkeedu yahay 15mm waxaa loo adeegsadaa soo saarista alaabta wax lagu durayo sida qaybaha gudaha ee baabuurta (sanduuqa xakamaynta, gudiga qalabka, iwm.) , qeybaha kore ee baabuurta (bumper, fender, iwm), iyo qolofka qaybaha qalabka elektarooniga ah (kombiyuutarka laptop, taleefanka gacanta, iwm).
Qalabka wax soo saarka pellet -ka ayaa inta badan waxaa ka mid ah saxaarad kaydinta siligga, taangiga dheef -shiidka, cagaf iyo qayb goyn ah. Intii ay shaqadu socotay, xidhmadii fiber -ka ee laga soo qaaday saxanka kaydinta ayaa marka hore gasho taangiga faleebada, si dheriga kuleylka ah ee la dhalaaliyey uu u noqdo xidhmada fiber -ka iyo xidhmada fiber -ka ee la cusbaysiiyey. Xidhmada fiber -ka ee cusbada leh ayaa markaa cagafku soo jiidayaa oo gooyaa qaybaha.
Dhammaan noocyada kala duwan ee khadadka wax -soo -saarka dhalada dhalada dhalada dhaadheer oo ay ku jiraan qaab -dhismeedka kor ku xusan waxaa lagu siiyaa duub -jiidis ku saabsan jirka cagafyada. Codsiga wax ku oolka ah, laga bilaabo dusha sare ee xidhmooyinkii fiber -ka xuubka leh ee si toos ah loogu galiyay duubka cagaf -cagafta, xidhmooyin faybar -la -maroojiyey iyo meelahii xidhiidhka is -riix -riix -riixitaanka ayaa go'an oo ka soo baxay jeexdinta, si ay u kala jajabtaan jaranjarada rogaalku u jaro xirmooyinka fiber -ka ee cusbada leh, Wareegga jiidista waa in la beddelaa si loo buuxiyo shuruudaha jiidista, taas oo si weyn u yareyneysa nolosha adeegga roogga googoynta.
Hore: Taxanaha CTS-CD Twin Ku marooji Extruder
Xiga: Biyaha hoostiisa Pelletizing Line Production